पंखेको टोपी- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
पंखे कछुवालाई टोपी लगाउन मनपर्थ्यो  । उसका प्रायः सबै साथी थरीथरीका टोपी ढल्काएर हिँड्थे  ।
ऊसँग एउटा पनि टोपी थिएन । उसले आफ्नी आमालाई धेरैपटक टोपीका लागि गनगन गरिसकेको थियो । तर आमाले पछि किन्दिउला भन्दै टार्दै आएकी थिइन् । अरूको टाउकोमा टोपी देख्दा उसलाई डाहा भएर आउँथ्यो । एक दिन झिल्के खरायोले टाउकोमा छिरर्बिरे टोपी ढल्काउँदै भन्यो, ‘यी हेर, मेरो नयाँ टोपी ।’ यसो भन्दा पंखे कछुवालाई कम्ता रिस उठेन । तर रिसाएर के गर्नु ? आफ्नो नभएपछि ।
‘पख् न, तेरोभन्दा झन् राम्रो टोपी म आमालाई किन्न लगाउँछु, उसले मनमनै भन्यो, ‘मेरो पनि दिन कसो नआउला १ आमालाई जसरी पनि टोपी किन्न मनाउँछु १’ भोलिपल्ट आमा बजार जाने मौका छोपेर ऊ पनि लुसुक्क पछिपछि लाग्यो । आफ्नी आमाबाट कहिले झाडीतिर त कहिले रूखमा छेलिँदै बजार पुग्यो । बजार आइपुगेपछि हुत्तिँदै आफ्नी आमा छेउमै पुग्यो । टोपी किन्नका लागि रोईकराई र लडीबुडी गर्‍यो । बजार भर्न आउने सबैले उसैलाई हेर्न थाले ।
‘मलाई टोपी किनिदिन्छु भनेर किन सधैं ढाँटेको ?’ उसले रुँदै भन्यो, ‘आज जसरी पनि किन्दिनुपर्छ १’आमालाई पनि सबैको अगाडि पंखेले यस्तो भनेको सुनेर लाज लाग्यो । ‘हो त है, मैले किनिदिन्छु भनेर सधैं ढाँटेको ख्यालै नगरेको रहेछु भन्ने महसुस भयो । उनको मन पग्लियो । आमाले पंखेलाई भनिन्, ‘नरोऊ छोरा, आज म तिमीलाई पक्का टोपी किनिदिन्छु । तमासा नगर बाबु, अहिले किनिदिन्छु । बरु जाऔं हिँड ।’
आमाले पंखेलाई टोपी पसलतिर लगिन् । पंखेले धेरै टोपीहरू ओल्टाईपल्टाई हेर्‍यो । अरूले लगाएको भन्दा फरक खालको टोपी कस्तो चैं होला भनेर मनमनै सोच्दै छान्न थाल्यो । अन्ततः उसलाई मनपर्ने पहेंलो रंगको टोपी फेला पर्‍यो । यो टोपी अरूले लगाएको भन्दा एकदम फरक पनि थियो । टोपी गोलो थियो । किनारामा हल्का गुलाबी छिर्बिेरे रंग थियो । टुप्पामा चैं डोरीको गाँठोजस्तो लत्रिएको थियो । फरक खालको आकर्षक टोपी देखेर ऊ भित्रभित्रै गद्गद् भयो ।
टोपी लगाएर यस्सो ऐनातिर हेर्‍यो । उसलाई टोपी खुब सुहाएको महसुस भयो । आमाले पनि ‘राम्रो देखिएको छ’ भनिन् । आखिरमा पंखेको पनि टोपी लगाउने सपना पूरा भयो । ऊ टोपी ढल्काउँदै सबैतिर डुल्यो । आफ्ना सबै साथीलाई नयाँ टोपी देखायो । सबैले उसको टोपी निकै राम्रो छ भने । सबैको प्रशंसा सुनेर ऊ मख्ख पर्‍यो । रोईकराई गरेर किनेको टोपीप्रति उसको खुब मोह थियो । पंखेको टाउकोमा टोपी कहिले छुट्दैनथ्यो । जहाँ पंखे, त्यहाँ टोपी । तर एक दिन पंखेको टोपी जोडसँग चलेको हावाले उडायो । टोपी कहाँ पुर्‍यायो कहाँ ?
टोपी उड्दै चिडियाखाना पुग्यो र कंगारुको टाउकामा बस्यो । त्यति नै बेला कंगारुलाई हाच्छियुँ आयो र टोपी उड्यो । टोपी उड्दै कंगारुको खोरबाहिर पुग्यो । टोपी उड्न रोकिएन । सिंहको ओडारभित्र पो पस्यो । सिंहको पुच्छरमा गएर अड्कियो । सिंहलाई पुच्छरमा काउकुती लाग्यो । पुच्छर जोडले हल्लायो । टोपी पुच्छरमा फनफनी नाच्न थाल्यो । र, फेरि उड्यो । उता, पंखेले माथि हेर्‍यो, तल हेर्‍यो । यता हेर्‍यो, उता हेर्‍यो । टोपी कहीँ देखेन । न्याउरो अनुहार लगाउँदै भन्यो, ‘मेरो टोपी कहाँ गयो, कहाँ खोज्ने होला ?’ टोपी उड्दै नदी छेउ ह्वेल माछाको आढमा पुग्यो । अलि तल घना जंगलछेउ झाप्ले भालुको वरिपरि पुग्यो । बाँदरले झम्टेर धुजाधुजा पार्न चाहयो । गैंडाले कुल्चेर कच्याककुचुक पार्न खोज्यो । न्याउरीले आफ्नो थुतुनोले च्याप्प समात्न खोज्यो । जिराफले त झन्डै चपाउनै खोज्यो । पंखेको टोपी कहिले हावामा फनफन उड्थ्यो, कहिले सुइइयँ सुइइयँ गर्दै यताउता पुग्थ्यो ।
जमिनमा लडखडाइरहेको टोपी घाँस चरिरहेको अर्नाले भेट्टायो । उसले टोपी ओल्टाइपल्टाई हेर्‍यो । ‘अरे १ यो टोपी त पंखे भाइको जस्तो छ,’ उसले मनमनै अड्कल काट्यो र पंखे भएतिर दौडियो, ‘ओ, पंखे भाइ । यो टोपी तिम्रो हैन ?’ पंखेले खुसी हुँदै भन्यो, ‘हो अर्ना दाइ ।’
‘यसले गर्दा तिमीले सार्‍है दुःख पायौ है । लौ लेऊ तिम्रो टोपी, मैले भेटेर ल्याइदिएको छु,’ अर्नाले भन्यो, ‘अबदेखि सल्लाको खोटोले टाँसेर टोपी लगाऊ । हावाले उडाउँदैन ।’पंखेले अर्ना दाइलाई ‘धन्यवाद’ भन्यो । अर्नाले भनेझैं टोपीमा खोटो दल्यो र लगायो । साँच्चै जति ठूलो हावा आए पनि टोपी उडाएन । पंखेको मनपर्ने टोपी सधैं उसकै टाउकामै बसिरह्यो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ १०:३६
चित्र कोर्ने हुटहुटी  । उत्कृष्ट चित्र बनाउने रहर  ।
५६ विद्यालयका १ सय ५ विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा । कास्की जिल्लाका यी विद्यार्थी गत मंगलबार एकै थलोमा जुटेका थिए– पोखरा मासबारस्थित मदरल्यान्ड माविमा । रजत जयन्ती वर्षका अवसरमा विद्यालयले गरेको थियो चित्रकला प्रतियोगिता । तोकिएको १ घण्टा ४५ मिनेट अवधिमा विद्यार्थीले बालबालिका, शिक्षा र विद्यालयसम्बन्धी विषयका चित्र कोरे । प्रतियोगिताको उपाधि गिरी स्पाइरल ग्यालेक्सी मावि कक्षा १० की स्मृति गिरीले जितिन् । केफ माविका सन्तोष भट्टराई द्वितीय र सृजना माविका संगम पौडेल तृतीय भए । शिशु निकेतन माविकी मुस्कान गुरुङलाई सान्त्वना र शिशु कल्याण माविकी सब्रिना परियार गुरुङलाई प्रोत्साहन पुरस्कार दिइयो । चित्रकारहरू गोपाल श्रेष्ठ, सुनील सिग्देल र झपीन्द्र गुरुङले विद्यार्थीले बनाएको चित्रको मूल्यांकन गरेका थिए । कार्यक्रमका अतिथि कार्टुनिस्ट दुर्गा बराले विद्यार्थीको प्रयास प्रशंसनीय भएको बताए ।